खुल्लामन्च: न्यायपालिका, न्याय र बिमोचनहरु :
न्यायपालिका, न्याय र बिमोचनहरु :
राजा राम शाहको न्यायिक चौतारो गोरखाको बजार माथिको गोरखकाली जाने उकालोमा अहिले पनि कुशलै छ । हुन त हाम्रा होनहार न्यायमुर्तीहरु त्यो न्यायिक चौतारो पुग्नु भएको छैन होला वा पुग्नु भएकाहरुले देख्नुभएन होला अथवा वास्ता नगरि भुल्नु पनि भयो होला । खैर, आखिर जे होस् । राम शाह पछी पृथ्वी नारायणले टाकुरा र रजौटाहरुका टाउका काट्दै नेपाल एकिकरण गर्दाका बखत कती न्याय वा अन्याय दिलाए, त्यो त उनै गोराखनाथ बाबालाई थाहा होला कि त इतिहास शिरोमणिहरुलाई । जब काठमान्डौ नेपालको राजधानि भयो, त्यसै बखत तत्कालिन राणा, शाह र भारदार भनौदाहरु गाग्री बोक्दै गरेकी गाउकी चेलीलाई बलत्कार गरिराखेका हुन्थे, कोही श्री ३ हरु शमशेरहरुका टाउका गिड्नमै ब्यस्त हुन्थे त कोही शाहहरु दरबारको भर्र्याङ्को खुड्किलै पिछ्छे तरुनी मसार्दै खुड्किला उक्लन्थे अनी झर्दथे । जसरी अस्ती भर्खर सद्दाम, उनका छोरा उदय र भारदारी हुसैनहरु दरबारमा चैन गर्दथे । हामी अनुमान लगाउन सक्छौ कि सर्बसाधारण निमुखाहरुले पाउने त्यसबेलाको न्यायिक प्रणाली कस्तो थियो होला ? न ब्यबस्थापिका, न कार्यपालिका ! केबल तानाशाहहरुले कोत पर्ब, भन्डार्खाल र अरु कान्डहरुबाट सिकेका बदनामी अनी क्रुर एकतन्त्री हुकुमी न्याय । न प्रधानमन्त्री राजाका कुरा मान्दथे, न राजा प्रधानमन्त्रीका कुरा सुन्दथे । भरखरै पुन: पढेको "सेतो बाघ" मा नै उल्लेख छ, हुकुमी शासनको न्यायिक चर्तिकलाहरु । जसरी त्यतिबेलाका न्यायिक तराजुभन्दा बाजे बराजुका बचे खुचेका खुडा र तरवारहरु बलवान थिए, अनी न्यायको खातिर तरवारहरु निर्दोश टाउका काट्न उद्धत हुन्थे ।
०४६ सालको क्रान्ति, १० बर्षको जनयुद्द अनी नयाँ नेपाल बनाउने भनिएको "नया नेपाल क्रान्ति" । यि सबै अनेक फुरुङा लगाइएका क्रान्तिका नव-नामहरु जतीसुकै फलाके'नी, पुकारे'नी धिक्कार्नु बाहेक प्रतिफल केही भएन । हरेक नव-नामधारी क्रान्तिका महानायकहरुका परिवारको पालन्-पोशण गर्ने खालको कार्यपालिका र भ्रस्टाचारिहरुलाई चोख्याउने न्यायपालिकाको साथसाथै सान्सद बेच्ने र पुरुष सुत्केरी हुने "नव-नियम" हरुको प्रतिपादन बाहेक निमुखालाई रसस्वादन गराउने कुनै "महान कार्यहरु" हुन सकेन । यस बिचमा न जनताका लागि कुनै बैकासिक उपलब्धी भए न कुनै भस्टाचारीहरु चिसो खोरमा रमाउन पाए । ००७ साल पछीका कुरा यहाँ उठायो भने सबैका पुर्पुरा तात्तिएर आउछन, जुन स्वाभाबिक नै होला । तर ०४६ साल पछी बनेको कांग्रेसको सरकारले रेडियो नेपाल र सरकारी कार्यालयहरुमा कार्यकर्ता भर्ती गर्नु भन्दा सिवाय न्यायको लागि कुनै सिन्को भाचेन । जनताको लागि न्यायिक नियम त परै जाओस, स्वतन्त्र सेनानी र शहिदका परिवारलाई कांग्रेस र यसको सरकारले चटक्कै बिर्सियो । सत्ताको उन्मादमा गरेका कु-कर्महरुको प्रतिफल आज कांग्रेस दलानमा बसेर झरिमा बिस्कुन सुकाएको हेरिरहेछ । आधा काल सत्ताको त्यो अबधिमा कुनै प्रदीप गिरिहरु माथि आउन सकेनन, चक्र बास्तोलाहरु हराए, दमननाथहरु अर्कै मियो समाउन पुगे, निर्बाचित गुरुराज र गगन दरबारिया कहलिए र आज नरहरिहरु जातोमा पिस्सीरहेका छन । कार्यकर्ताहरुको यो हबिगतको बिचमा जनताको लागि न्यायिक विश्वाश के आशा गर्नु र भयो के ?
नौ महिने एमालेको शासनमा कांग्रेसी कार्यकर्ताहरु एक एक गरी मन्त्रालय र भर्तिकेन्द्रहरु बाट धपाइए । उता "जनताको न्याय क्रान्ति" को नाममा चलेको "जनयुद्ध" त यस अगाडि नै धेरै माथि पुगी सकेको थियो नै । एमालेले न मदन भण्डारी र आश्रितको हत्यारा पत्ता लगायो न रत्न पार्कको ग्रील भाँच्न लगाएको शक्ती सरकारमा देखायो । केबल रातो दरबार निर्माण र बामदेवको "शक्ती सन्चय"को नौलो थालनिमा मात्रै रुमल्लिन रनभुल्ल भयो । अच्युत खरेल माथि अन्याय भयो होला शायद अनी ध्रुब प्रधानलाई न्याय । यसबिचमा पुराना पञ्च प्रधानमन्त्रीहरुले कती कमाए, सुरा र सुन्दरी लगायत अनेकौ बिमान किन्बेच कान्डमै धेरै बर्ष बित्दै आज हामी "जनयुद्ध बाट स्थापित ?" सरकारको न्यायको कठघरामा उभिएका छौ । सबै पार्टी मिलेर गरेको चुनाव कत्तिको न्यायोचित भयो र आज जनताको सामु घटी रहेका बिकास वा अन्धकारका घटनाहरु कत्तिको पाच्यशिल भएको छ, गरीब जानुन । "नव-सामन्तिहरु" लाई यसको लेखा जोखा गर्ने फुर्सद छैन, होइन र ?
जुन पार्टिको सरकार भयो, मन्डले हरुले नयाँ भेश बदले । कमल थापाले बदले, निछ्य शमशेरहरुका दिन आए । पारसले प्रबिण मार्यो । खै परिवारलाई न्याय ? करोडौको मुर्ती बेचियो, खै भगवान प्रती आस्थाको न्याय ? "कसैले ?" बन्श नै सखाप हुने गरी रमाइलो नौलो कोतपर्ब घटायो, खै न्याय ? खोइ नियम ? हामी मामुलिका कुरा छोडिदिउ, त्यसै बखत राजाकुमारी मध्यारातमा हेलिकपटरको सहराले सडकओ लागि रारा तालमा पौडिन पुगिन । जनता र मुलुकले पाएका यि यस्तै न्यायिक घटनाको एउटा रामायाण भन्दा ठुलो ठेली यहाँ उल्लेख गरी साध्य छैन । तर तिनै मन्डलेहरु आज मोबाईल र मोटार्साइकलको प्रयोगले बालकहरु अपहरण गर्दै हिनेका छन । न्याय छ त केबल जो सँग हतियार छ अनी शक्ती छ । हामी भुक्तभोगी र सदाका रोगिहरुलाई केबल अन्याय र अन्धकार मात्रै ।
र आज मुलुकमा जतातती पानसमा बत्ती बलेको छ । निमुखाको घरमा अन्धकारमा बल्न नपाएर चिम जलेको छ भने रणबिर सेना, तराइका अनेक थरिका सेना लगायत पहाडी समुहहरुका कार्यक्रमले भित्र सभा कोठिहरु प्रज्ज्वल्लित छन । हरेक दिन नयाँ कार्यक्रम र रुपरेखाहरु बिमोचन भएका छन, नयाँ मुलुकमा । राणबिर सेना सँगको धमलाको बार्ता बिमोचन भएको थियो । नायक जेलमा गएको अभिनयको अर्को भब्य बिमोचन भयो अनी त्यो कथा यत्र तत्र खुबै चल्यो । निर्देशक प्रचन्ड र कथाकार कोइरालाको बर्ताको बिमोचन भयो र आज नायक धमला सर्बश्रेस्ठ नायकको पगरी सहित बिमोचित भएका छन । किन नायक धमला मात्रै हल्लाका र सल्लाहका पात्र भए ? अरु खलनायक हरुको बिमोचन कहिले त ? यदी धमला निर्दोश हुन भने रणबिरका महान बिरहरुको लागि बोल्ने को ??? यस्तै प्रकारको छ हाम्रो न्यायिक परम्परा । त अब हामीलाई लोकेन्द्र चन्दको सरकार, चन्द्र समशेरको सरकार अनी प्रचन्डहरुको सरकार बिच के फरक त ? जनसेना खेलकुदमा माहिर छन रे त्यसैले नेपाली सेना मैदानमा नभएको हो ? तर जनसेनाका सुप्रिम कमाण्डर हरु नव नायक धमलाहरुको चलचित्र हेर्न मै मस्त छन ।
त्यसो त न मुलुकले बिकासमा न्याय पाएको छ - जसको घरअगाडिबाट पानी बगेको छ, त्यही टोल प्यासी छ । जहाँ शान्तिदुत जन्मे, त्यही पुन: भयन्कर अशान्ती छ । जुन मुलुक सुन्दर छ, त्यही आफन्तैद्दारा बलात्‍कृत छ । जहाँ सयौ बर्ष पहिले न्यायको चौतारो रोपिएको थियो, त्यही दिनहु अन्याय र आतंकका कयौ घटनाहरु दिनानुदिन बिमोचित भईरहन्छन । जोहरु हिजो न्यायको लागि लडेका थिए, आज तिनिहरु नै कालो कोट सस्तोमा बेच्न लालायित छन । एबम रीतले बिकसित हुँदै गयौ भने हाम्रो मुलुक धेरै चाडो "नया नेपाल" हुनेछ । हाम्रो नयाँ नेपाल होइन हामी कुनै अर्को राष्ट्र सँगै मिलेर राज्य गरिने "नया नेपाल" । त्यती बेला नयाँ राष्ट्रपती बाराक ओबामाले पठाउने छन भने प्रधानमन्त्री सोनिया गान्धिले नियुक्त गर्नेछिन अनी तपाईं हाम्रो शिरमा गीर खेल्न सुसज्जित हुँदै बेइजिङ्ले प्रधान सेनापती पठाउने छ अनी लुम्बिनीमा दलाई लामा ध्यानमा मस्त हुनेछन, विश्व शान्तिको लागि । अनी सबैलाई समान न्याय । जय न्यायमाता ! जय नेपाल !!
स्थिति निश्चयनै भयावह छ विवशजी, तर आशावादी हुनु र आफ्नो ठाऊँबाट जो सकेको आवाज उठाउनुको विकल्प पनि छैन।
राम्रो लाग्यो यो टाँसो।
गोकुलजी र यो ब्लगका पाठकहरुमा नयाँ वर्षको हार्दिक मंगलमय शुभकामना!
आमालाई सम्झदै दुई हरफ
आश भो ....
नयाँ बर्ष २०६६ सालको हार्दिक शुभकामना !!!